El Chaappo: Ilma nama qoricha sammuu addoochuratti dhukaasni taasifame - BBC News Afaan Oromoo
El Chaappo: Ilma nama qoricha sammuu addoochuratti dhukaasni taasifame
Kaaba Meeksikootti hogganaan garee dadabarsitoota qoricha sammuu adoochuu bakka itti argamu erga beekameen booda garee humnoota nageenyaafi miseensoota garichaa jidduutti waraanni cimaan gaggeefame.
Bakki namni Ovidio Guzmán López jedhamu jiru kan adda bahees sakkatta'iinsa poolisoonni taasisan kan idileetiin ture.
Inni ilma El Chaappoo kan ''Drug Lord'' jedhamuun beekamuufi Ameerikaa keessatti dadabarsa qorichaatiin himamuun umuurii guutuu hidhaarraa kan jiruudha.
Wal waraansi dhukaasaa kunis Kamisa wayita poolisoonni al seenuun Ovidio Guzmaan itti qaban gahaniitti.
gaheessi umuriin waggaa 62 El Chaappoon mana murtii Niiw Yoork keessaatti dhiyaachuun himannaawwan 10 balleessaan irratti argameera jedhameera.
Namni kunis waggoota afuriin booda man hidhaa Meksiikootii karaa lafa jala qotameetiin kan baqate bahee ture yoo ta'u, booda rra garuu to'atamuun dabarfamee Ameerikaaf kenname.
El Chaappoon garee amma ilmasaatuu oggana jedhamuufi qondaaltoonni Ameerikaa akka jedhaniitti qoricha gara biyya saanii galu olaanaa kan dhiyeessuu garee Siinaalowaa jedhamu kan ogganu isaadha jedhamaa jira.
Ogganaan garee qoricha dadabarsanii Ovidio Guzmán, dargaggeessa umuriin saa waggaa 20n keessatti argamu yoo ta'u, erga abbaansaa hidhameen booda garee Siinalowaa ogganuun gahee olaanaa akka qabu himama.
Midiyaalee sab quunnamtii ummataa Meeksikoo akka gabaasaniitti dargaggeessi kun himannaa dadabarsa qoricha samu hadochoo walqabate himannaawwan hedduun irratti dhiyaateera. kana duras yeroo gabaabaaf poolisiin qabamee gadhiifamu himameera.
Sababii wal waraansa gareewwan qoricha dadabarsaniifi miseensoota poolisii jidduutti gaggeefameenis miidhaa qaqabe ilaalchisees wan aanga'ootaan jedhame omtu jiraachu baatulleen suuraaleen magaalicha keessaa bahaa jiran garuu reeffi daandiiwwan irratti kufan mullisu.
Qoricha sammuu adoochu fudhachuu
El Chaappoo: Daldalaan qoricha sammuu hadoochu Meeksikoo hidhaa umurii gutuun adabame
El Chaappoon pirezidaantii Meksiikoo duraanii Pena Niyeetoof $100m matta'aa kenneera
Mootiin qorichoota sammuu hadoochanii El Chaapoon US'tti yakkamaa jedhame
Mootummaa fi humni waraanaa UK 'yakka waraanaa dhoksuun' himataman
Suuraa mucaa ganna 5'f hiree barnootaa argamsiise